साताको अन्तिम कारोबार दिन २६७४.३५ विन्दुमा नेप्से, ६ अर्ब ५५ करोडभन्दा बढीको कारोबार
चैत २६, काठमाडौं । साताको अन्तिम कारोबार दिन बिहीवार नेप्से परिसूचक २ हजार ६७४ दशमलव ३५ विन्दुमा बन्द भएको छ । यो दिन अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा परिसूचक २ दशमलव ७४ अंक अर्थात् शून्य दशमलव १० प्रतिशत बढेको हो । यस दिन सेन्सेटिभ इन्डेक्स भने स्थिर रहेको छ ।
बिहीवार २ हजार ६९० दशमलव २८ विन्दुदेखि बजार खुलेको थियो । यस दिन २०७ ओटा कम्पनीको ७१ हजार २४१ पटकको व्यापारमा रू. ६ अर्ब ५५ करोड ६६ लाख १६ हजार बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । उक्त रकम बराबरको १ करोड ३३ लाख ७६ हजार कित्ता शेयर कारोबार भएको हो ।
यो दिन सबैभन्दा बढी अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेडको शेयर कारोबार भएको छ । अपर तामाकोशीको रू. ३७ करोड १३ लाख ४४ हजार बराबरको शेयर कारोबार भएको हो । सर्वाधिक कारोबार भएको दिन कम्पनीको शेयरमूल्य न्यूनतम रू. ८८६ देखि अधिकतम रू. ९३३ सम्म पुगेको थियो । अन्तिम मूल्य अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा रू. १ ले बढेर रू. ८९२ कायम भएको छ । बिहीवार कम्पनीको शेयर कारोबार रू. ९२५ मा खुलेको हो ।
साताको अन्तिम दिनको कारोबारमा वित्त समूह र लघुवित्त समूहका लगानीकर्ताहरुले कमाएका छन् । यसदिन वित्त समूहको परिसूचक सर्वाधिक ३ दशमलव १८ प्रतिशत र लघुवित्त समूहको २ दशमलव शून्य ९ प्रतिशत बढेको हो ।
त्यस्तै, बैंकिङ समूहको शून्य दशमलव १ प्रतिशत, होटल्स तथा पर्यटन समूहको शून्य दशमलव ७३ प्रतिशत, विकास बैंकको शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत, जीवन बीमाको शून्य दशमलव ५४ प्रतिशत र म्युचुअल फण्डको शून्य दशमलव १३ प्रतिशत परिसूचक बढेको छ । यस दिन अन्य समूहको परिसूचक सर्वाधिक १ दशमलव शून्य ७ प्रतिशतले घटेको छ ।
यो सँगै जलविद्युतको शून्य दशमलव ८८ प्रतिशत, व्यापारिक समूहको शून्य दशमलव ८१ प्रतिशत, उत्पादन तथा प्रशोधन समूहको शून्य दशमलव ५१ प्रतिशत, निर्जीवन बीमाको शून्य दशमलव ४६ प्रतिशत र लगानी समूहको शून्य दशमलव ४२ प्रतिशत परिसूचक घटेको छ ।
यो दिन आधा दर्जन कम्पनीको शेयरमूल्य ९ प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ । एनआईसी एशिया लघुवित्तको ९ दशमलव ९४ प्रतिशत, ग्रीन लाईफ हाइड्रोपावरको ९ दशमलव ९२ प्रतिशत, ज्योति लाईफ इन्स्योरेन्सको ९ दशमलव ७९ प्रतिशत, मल्टिपर्पस फाइनान्सको ९ दशमलव ७७ प्रतिशत, रिलायन्स फाइनानसको ९ दशमलव ६८ प्रतिशत र ग्लोबल आइमई लघुवित्तको ९ दशमलव ६० प्रतिशतले मूल्य बढेको हो ।
एनआईसी एशिया लघुवित्तको अघिल्लो कारोबार दिन बुधवारको तुलनामा प्रतिकित्ता रू. १२७ ले बढेर अन्तिम मूल्य रू. १ हजार ४०५, ग्रीन लाईफ हाइड्रोपावरको प्रतिकित्ता रू. ३७ ले बढेर अन्तिम मूल्य रू. ४१०, ज्योति लाईफ इन्स्योरेन्सको प्रतिकित्ता रू. ३८ ले बढेर अन्तिम मूल्य रू. ४२६, मल्टिपर्पस फाइनान्सको प्रतिकित्ता रू. २१ ले बढेर अन्तिम मूल्य रू. २३६, रिलायन्स फाइनान्सको प्रतिकित्ता रू. २७ ले बढेर अन्तिम मूल्य रू. ३०६ र ग्लोबल आइएमई लघुवित्तको प्रतिकित्ता रू. २१४ ले बढेर अन्तिम मूल्य रू. २ हजार ४४४ कायम भएको छ ।
सामान्य अंकले बढेको बजारमा यूनिभर्सल पावर र रसुवागढी हाइड्रोपावरको शेयरमूल्य ४ प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको छ । यूनिभर्सल पावरको शेयरमूल्य ४ दशमलव ४२ प्रतिशत अर्थात प्रतिकित्ता रू. ८ ले घटेर अन्तिम मूल्य रू. १७३ र रसुवागढी हाइड्रोपावरको ४ दशमलव १७ प्रतिशत अर्थात् प्रतिकित्ता रू. २२ ले घटेर अन्तिम मूल्य रू. ५०६ कायम भएको छ ।
बिहीवार सर्वाधिक रकमको कारोबार गर्ने १० ओटा कम्पनीहरु :